Isitya sichukumisa inethiwekhi yayo ye-5g yexesha elizayo njenge 'netflix' kwiverizon, at & t, kunye ne-t-mobile & apos; s 'blockbuster'
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isitya sichukumisa inethiwekhi ye5G yexesha elizayo njenge 'Netflix' kwiVerizon, AT & T, kunye neT-Mobile kunye neapos; 'iBlokbuster'
Isitya sichukumisa inethiwekhi ye5G yexesha elizayo njenge 'Netflix' kwiVerizon, AT & T, kunye neT-Mobile kunye neapos; 'iBlokbuster'
Emva I-T-Mobile kunye neSprint ekugqibeleni zajoyina imikhosi (ngokusemthethweni) ngomhla woku-1 ku-Epreli, ukuqukumbela phantse iinzame zabo zokudibana ezazifuneka tsiba kuzo zonke iintlobo zolawulo kwaye iihupu ezisemthethweni Umzi mveliso wase-US ongenazingcingo ulungiselela ukutshintsha imeko ngoku.
Musa ukulinda kwiPixel 4a, iPixel 4 yi- $ 350 isaphulelo ngoku!
Endaweni yeziphatho ezine ezinkulu, abathengi baya kufuna ukukhetha kuluhlu lwamagama amathathu xa befuna ukuvula ifowuni okanye izibuko elitsha kwinombolo esele ikho kungekudala. Ekuboneni kuqala, kunokubonakala ngathi ukhuphiswano lweemarike luyacuthwa njengesiphumo esithe ngqo sokwakhiwa kwe-'New T-Mobile 'behemoth, enokuthi ibonakalise ingozi kukhetho lwabathengi kwaye ekugqibeleni ibangele ukuba amaxabiso esicwangciso eselula anyuke.
Kodwa ubuncinci okwangoku, ngokuqinisekileyo ezo zinto azenzeki, njengoko Inguqulelo kwaye I-AT & T. ziphantsi ukwanda koxinzelelo oluvela kuMagenta kubo bobabini phucula uthungelwano lwabo kwaye amaxabiso asezantsi . Kwaye kukho & apos; s Isitya , yeyiphi wadlala indima ebalulekileyo Ukutywina isivumelwano phakathi kweT-Mobile kunye neSprint ngu ethembisa ukuthatha indawo yokugqibela & apos; njengowesine ngobukhulu ophethe i-wireless kwilizwe liphela. Ukwenza oko, umboneleli weTV osekwe eColorado kufuneka avale eyakhe Ukunyusa ukufunyanwa kweselfowuni kwaye ngokuyintloko yakha inethiwekhi entsha ye-5G ukusuka ekuqaleni.
Imali ayongxaki ... okwangoku
Nangona Isidlo kunye neapos Q1 2020 ingxelo yemali Ngokuqinisekileyo ibinokubonakala ibhetele (ukutsho nje okuncinci), njengoko amanani enzuzo kunye nevidiyo ababhalisile bethathe into enokuqikelelwa ngokubetha okunxulumene ne-coronavirus, usihlalo wenkampani kunye nomseki UCharlie Ergen ubanga ukuba 'yinxalenye yenkxaso mali' ye-5G yokwakhiwa kwamanani ayigcini mntu 'ebusuku ngeli xesha.'
Ngelixa abaphathi abaphezulu be-Dish belindele ukuba iindleko ezinxulumene ne-5G ezijikeleze i-10 yezigidigidi zeedola kunye noqikelelo lwabahlalutyi zihamba ngaphaya kwelo nani, u-Ergen uthatha amanyathelo omntwana, eqaqambisa ukuba inkampani ingazifumana izibalo njengoko zihamba, zisenza utyalo-mali olucothayo noluthe chu kwinethiwekhi ukukhutshwa kunye nokwandiswa. Kwabaqalayo, kukho ii- $ 1 zezigidigidi ze-equity Dish ezinokuxhomekeka, kunye nokuhamba okuzinzileyo kwemali evela kwicandelo lokuhlawula i-TV kunye nokwehla komthwalo wetyala obonisa ukuba inkampani ikwindawo entle yokuthetha ngokwasemalini.
Okwangoku, bekukho izinto ezininzi ekuthethwa ngazo imfuno yeqabane elingene epokothweni ekuhambeni kwexesha, kwaye nangona isazisi somntu oza kuba ngumlingane (okanye abo unxulumana nabo) sihlala sisisongekile, u-Ergen uyaqhubeka nokuthanda wonke umntu onomdla.
Ngaphandle okanye ngaphandle umntu onjengeAmazon okanye uGoogle Ukuxhasa ngezimali izicwangciso zayo zokuzivelela, iDish iqinisekile ukuba uthungelwano lwayo luya kuba ngcono, 'kungabizi kakhulu, kungabizi kakhulu ukusebenza kwaye kubhetyebhetye' kunoko 'kungabasebenzi abangenazingcingo' okwangoku.
Ukunyusa intengiselwano kuya kugqitywa kungekudala, kulandelwe ukuqaliswa kwenkonzo yolingo lwe5G
Phambi kokuba ucoce umhlaba nge-'Netflix'yesitayile sebhendi ebanzi ethatha iklabhu 'yeBlockbuster' equlathe iVerizon, i-AT & T, kunye neT-Mobile, iDish ifuna ukuvala i-1.4 yezigidigidi zokufumana i-Boost, i-MVNO ene-Sprint Umnxibelelanisi wenethiwekhi) oya kuthi uqhubeke nokusebenza kwi-T-Mo & apos; s airwaves.
Isivumelwano kulindeleke ukuba sitywinwe kwangoko nge-1 kaJuni kwaye kungadlulanga umhla kaJulayi 1, ngokunokwenzeka sivumele iDish ukuba yonwabele umnini kunye nezoqoqosho kunyaka ukusukela ngoku. Kwithiyori, u-Dish uza kushiyeka ephantse ibe yi- $ 1 yezigidigidi esandleni sezinye iindleko ezingenazingcingo kulo nyaka emva kokuba kugqityiwe ukuthengiselana ngefowuni, kodwa inkampani ilindele ukusebenzisa iqhekeza laloo mali ngenxa yobhubhane we-coronavirus .
Okwangoku, oko kunokuba kwanele kwinethiwekhi ye-5G 'engundoqo' kunye ne & apos; inkonzo yolingo 'ukumilisela ngamanye amaxesha ukuphela kwe2020 kwimarike enye yaseMelika engachazwanga. Kuhlala kubonakala ukuba isitya singayandisa ngokukhawuleza kangakanani inkonzo emva koko, njengoko inkampani ifuna ukubonelela Isiginali ye-5G egubungele ngaphantsi kweepesenti ezingama-70 zelizwe ngo-2023 okanye uhlawule uNondyebo waseMelika izohlwayo ezibalulekileyo. Yileyo ithiyori, ewe, kuba imigaqo yonyaka ophelileyo kunye nesivumelwano se-DOJ asikaze siqwalasele iziphumo zoqoqosho kule ngxaki ikhoyo yezempilo kwilizwe liphela.
Eyona nto ibhetri ye-galaxy s6
Iapile jonga ukuba yintoni ebhokisini
Uhlengahlengise kwakhona i-iPad mini 6 ukuvuza kuyilo olufana nomoya we-iPad, i-USB-C, ngakumbi
Uhlaziyo lukaFacebook Messenger Lite longeza ezinye izinto ezintle
Uvavanyo lwe-Apple iPhone 12
I-Apple iPhone 5 ineemakrofoni ezintathu kunye nenkxaso yelizwi le-HD, zeziphi ii-apos ezikuyo
Isamsung yazisa i-Galaxy Tab ye-S6: ithebhulethi yepro kwicala le-Android
I-Pokedmon ye-GO eguqulelweyo kunye ne-DroidJack ye-malware ibonwe, nantsi i-apos; indlela yokujonga ukuba i-APK yakho isemthethweni
Umhla wokukhutshwa kweSamsung ye-Samsung 4, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Uvavanyo lweAlcatel OneTouch Idol 3 (5.5-intshi)
I-6 yezona meko zibalaseleyo ze-Motorola DROID MAXX 2 ezikhoyo ngoku
Ityala le-Otterbox Defender Series ye-Apple iPhone 6 Plus yoVavanyo